“Muhiim ma ahan inaan ka cabsano Cristiano Ronaldo”… macalinka kooxda Valencia Marcelino – Gool FM
(Champ League) 18 Sab 2018. Marcelino ayaa hoos u dhigay inay jirto cabsi ay ka qabi karaan Cristiano Ronaldo, kahor kulanka ay ku wada ciyaari doonaan kooxaha Valencia iyo Juventus wareega koowaad ee Champions League.
Valencia ayaa lagu tiriyaa kooxaha uu ugu jecel yahay Cristiano Ronaldo kadib markii uu kaga horyimid kooxdiisa hore ee Real Madrid 17 kulan, wuxuuna kasoo dhaliyay 15 gool, mana uusan kala soo kulmin garoonkooda xitaa hal kulan ee guuldaro ah.
Macalinka kooxda Valencia Marcelino ayaa kahor kulanka kasoo muuqday shir jaraa’id wuxuna sheegay in wax cabsi ah aysan ka qabin Cristiano Ronaldo kulanka habeen dambe.
“Waxaan rajeyneynaa inaan ka badino Juventus, ka dibna waxaan ka fekereynaa Ronaldo, Cristiano waxaan iska hor nimid dhowr jeer, waxaana kala soo kulanay dhibaatooyin fara badan”.
“Laakiin xiligan ma jiraan wax cabis ah ee aan ka qabno, anaga kama baqeyno shaqada, waxaana isku dayi doonaa inaan joojino inta aan awoodno”.
Gudoomiyaha Xiriirka Kubada Cagta Soomaaliya Cabdiqani Siciid Carab oo soo xiray horyaalka Jubbaland+SAWIRRO